मनुजबाबु, कोलाहल र शान्ति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मनुजबाबु, कोलाहल र शान्ति
भयावह लाग्ने कलाहरूको पछिल्तिर मनुजबाबुको यथार्थ मानवको चरित्र बुझ्ने जुन सामथ्र्य थियो, त्यो काव्यिक थियो ।
श्रावण २६, २०७५ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — बौद्ध गुम्बाको नजिकै गान्धीको सावरमती आश्रमजस्तो एकजना गृहस्थीको थलो छ । परिवार बस्ने सानो घर, एकाध साना टहरा अनि एउटा घर सदृश नेपाली शैलीको माटोका भित्ता र परिवेश भएको उपघर छ । त्यो कलाकार मनुजबाबु मिश्रको थलो हो ।
यसलाई उनले ‘हर्मिताज’ भन्ने नाम दिए, जसलाई ध्यान गरेर बस्ने, अलिकता जगतबाट अलग वा रिट्रिट भएर बस्ने थलोका रूपमा बुझिन्छ । यो थलोमा उनले आफूले बुझेको र देखेको अनि आउने युगको रचना गरे । ती रचना पेन्टिङ र रेखाचित्र हुन् । ती शान्त मानिसको विषय आँधी थियो । ती प्राय: मौन मानिसले आफ्नो वरिपरि कोलाहलको रचना गरे । रकेटहरू आकाशमा उडिरहेका छन् ।
विशाल आकारका नाग र अजिङ्गरहरू भयानक रूप लिएर उठ्छन् । पहिलो दृष्टिमै सर्पदंश र भेदनकारी बम बोकेका रकेटहरू, तोप र भालाबाट प्रताडित मानवका अभिघात तिनका विषय हुन् भन्ने बुझिन्छ । ती पेन्टिङमा प्रयोग भएका हरित, पहेँलो, रातो, कालो र श्वेत रंगका अनौठा मिश्रणले जीवन र जगतले भोगेका प्रताडनाको चित्रण गर्छन् । ती आफूलाई त्यो भयानक जीवनभन्दा ठूलो विषयमा पात्र बनाएर बिना कुनै संकोच लिएर जान्छन् ।
कलामा उतारिएको विभीषिका र कलाकारको जीवनको अनुभव एकै होइनन् भन्ने मान्यतालाई मनुजबाबुले मानेनन् । कलाकारको शिर छेडेर उतापटि रकेट गएको छ । ती कलाकार जगतमा छन् र ती अरूले जस्तै जीवन भोग्छन् । यसरी मनुजबाबुले आफूलाई यो कोलाहललाई आफ्नो जीवनको लय बनाएका थिए । यो कोलाहल र यसभित्र उनले भेटेका महान शान्त क्षणहरू २३ साउन २०७५ को उनको अन्तिम यात्रामा उनीसँगै गएनन् । ती हर्मिताज र जगतमा यत्रतत्र व्याप्त छन् । उनको मुहारका आत्मचित्रहरूमा छन् ।
मनुजबाबुलाई बुझ्न उनका पेन्टिङको विभीषिकाको सोझो अर्थबाट सकिँंदैन । तिनको शिक्षाको परिवेश पनि हेर्नुपर्छ । समीक्षक संगीता थापा ‘ड्रइङ्गस अफ मनुजबाबु मिश्र (२००९)’ किताबमा मनुजको शिक्षाको थलो, गुरु अनि कलाकारको प्रभाव पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । पूर्व–पाकिस्तानको ढाकामा सन् १९६३–१९६९ सम्म तिनले पाएको शिक्षाको मनुजबाबुमाथि ठूलो प्रभाव छ ।
बंगालको अनिकालको चित्र र साहित्यमा सम्झिइने स्मृति, त्यहाँको दैन्य, गरिबी र तिनले देखेका मानिसको दुरावस्थाले तिनलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । भारतका गणेश पैन भन्ने कलाकारका कलामा चित्रित मानिसका भत्केका आकारहरू र शैलीको अनि यिनका गुरु जैनुल आवेदिन (१९१८–१९७६) को नव–बङ्गाल यथार्थवादको मनुजबाबु मिश्रलाई प्रभाव थियो भन्छिन्, संगीता थापा ।
तर आश्चर्यको कुरा म बंगलादेश बनेपछिको एक दशकपछिका वर्षमा त्यहाँ जाँदा त्यो दैन्यमा अर्को स्मृति हावी थियो । त्यो मुक्ति संग्रामको बेलाको भयावह नरहत्या र विस्थापित मानिसहरूका कथाले बनेको अवस्था थियो । त्यहाँका कलामा मनुजबाबुका कलामा जस्तै विषय, शैली अनि रङ्ग अभिव्यञ्जनाको प्रयोग देखेर म चकित परेको थिएँ । मनुजको समयका केही वयस्क शिक्षक कलाकार पनि भेटेंँ । मलाई त्यहाँ लाने ढाका विश्वविद्यालयका कला समीक्षक अंग्रेजीका प्राध्यापक मन्जरुल इस्लाम र कैसर हकले यो शैली र पद्धतिको व्याख्या गरेपछि मैले मनुजबाबुको शैली बुझ्ने निकै आधार भेटेको थिएँ ।
मनुजबाबुका विभीषिका बुझाउने पेन्टिङहरू कला हुन्, रचना हुन् । आफ्ना पेन्टिङको कोलाहलमा पसेर कलाकार नै हताहत भएको चित्रण गरे पनि ती अलग छन्, जसरी पिकासो जर्मनका बमहरूले ध्वस्त गरेको स्पेनी सहर गुएर्निकाको विभीषिकाको पेन्टिङ बनाए पनि त्यसबाट अलग थिए, जसरी सोह्रौं शताब्दीका इटालीका कलाकार काराभाज्जियो आफ्ना हिंसात्मक पेन्टिङबाट अलग थिए, जसरी लैनसिंह वाङ्देल आफूले पिकासोको प्रभावमा बनएका नील रङ्गका दुखियाहरूबाट अलग थिए ।
उन्नाइसौं शताब्दीका स्पेनेली चित्रकार फ्रान्सिस गोयाका पेन्टिङहरू मानिसका भयानक चरित्र र भञ्जनका चित्र दिन्छन् । बेलायती पेन्टर फ्रान्सिस बेकनका पेन्टिङ आधुनिक शैलीमा त्यस्तै भयानक हुन्छन् । धेरै उदाहरण छन् । तर मनुजबाबुको कलासँग मिल्ने नेपाली कलाकृति कमै भेटिन्छन् । एकदिन मनुजबाबु उनको घरको बरन्डामा पेन्टिङ गर्दै थिए । म हेरेर बसेको थिएँ । नील रङ्गी विद्रुप आकारहरू आउँदै थिए ।
त्यही बेलाको शान्त परिवेश भएको बौद्धको अलिक परबाट लाखे नाचको आवाज आउँदै थियो । मनुजबाबुले अकस्मात् भने, ‘अभि, थाहा छ ? यो लाखे नाचको मुखुन्डो र नाचबाट केटाकेटी तर्सिन्छन्, म त जानदिन्न ।’ लाखे नाचको दोहोरिने जात्राको शून्य मुखुन्डोभन्दा धेरै प्रभावकारी भयानक चित्र बनाउँदै थिए, ती । मलाई त्यस दिन लाग्यो, यी मानिसको हल्ला र विभीषिकाको पछिल्तिर एउटा भयानक निरपेक्ष शान्ति छ । एउटा बुद्धले देखेको शान्तिको क्षण छ । भयानक चित्रको पछिल्तिर यी त्यही शान्तिको रचना गर्दैछन् र गर्दैछन्, यो युद्ध र पारमाणविक मिसाइलहरू उडेको जगत् पछिल्तिर मानिसको मुक्तिको रचना ।
मनुजबाबु वयमा मभन्दा निकै जेठा भए पनि हाम्रो साहित्यिक, सांस्कृतिक चलनमा प्रयोग हुने शब्द ‘दाइ’ले मैले उनलाई कहिल्यै सम्बोधन गरिन । यो उनको हर्मिताज मैले एक्लै र केही मन मिल्ने मित्रहरूसहित धेरैपटक गएको र लामो समय बसेर, उनको कर्म हेरेर, अनि उनका विचारहरू सुनेर फर्केको थलो हो । कलाकारहरूले बसेर काम गरेका थलोहरू हेर्नु एउटा आपैंmभित्र मुक्तिबोध गर्नु र आपैंmलाई खोज्नु जस्तै हो ।
मैले यसरी कलाकार भएकै बेला तिनका कर्मस्थलमा गएर संवाद गरेका र हेरेका ठाउँहरू छन् । लैनसिंह वाङ्देलको माथिल्लो तलाको काम गर्ने थलो, बालकृष्ण समको बैठकबाट पसेपछिको पहिलो पेन्टिङ गर्ने कक्ष, अमर चित्रकारको घरको सहज परिवेशमा यसै बनेको कर्मशाला, उत्तम नेपालीको सर्वत्र चित्रले भरिएको काम गर्ने थलो, किरण मानन्धरको स्वयम्भू मुनिको आटेलियर भन्ने सानो कर्मथलो अनि उनको ताहाचलको घाम–छाया मिलाएको र पहराको गुफाजस्तो काम गर्ने कोठाहरू मेरा स्मृतिमा रङ्गरेखा, क्यानभासका आकार र तिनका तरङ्ग बोकेर अहिले पनि आउँछन् ।
ती थलोमा निकै पटक गएपछि एउटा तिनको छाप बस्छ । कलाकारले काम गर्ने थलो भनेको तिनले जीवनसँग कसरी संवाद गरे, मिलन र झगडा गरे, ती सबैको दृष्टिगोचर अस्थिर रूप र रङ्गले बनेको नाट्य मञ्च नै हो । तिनका खुसी र सङ्कट देखिन्छन्, तिनमा । मैले पश्चिमी र जापानी कलाकारका थलोहरू अनेकौं देखेंँ । तर फ्रान्सको मार्सेमा सेजानले समाजले तल्लो वर्गकी भनेकी महिलालाई लिएर एकान्तमा आश्रम गरेपछि पेन्टिङ गरेर जीवन चलाएको लेस्ताक भन्ने घर र थलोको सम्झना हुन्छ । तिनले मनुजबाबुले जस्तै समाजसँग विमति राखेर, अर्कै आत्मविश्वासले रचना गरेको थलो थियो त्यो । हर्मिताज थियो, त्यो उनको ।
मनुजबाबु मिश्रसँग मेरो साहित्यिक सम्बन्ध पनि थियो । तिनी एक निबन्धकार थिए । उनका निबन्ध ज्ञान र विज्ञानको बौद्धिक विषयको छलफल गर्छन् । उनी एक प्राज्ञिक र शिक्षक थिए, जसले कला इतिहासको किताब लेखेका छन् । उनले लेखेको ‘हर्मिताज : अढाई दशक गुफामा’ मैले भेटेको छैन । तिनले कथा र उपन्यास पनि लेखे, तर तिनले आफूलाई कलाकार मात्र ठान्थे । यथार्थमा मनुजबाबु मिश्रको चेतना एक कलाकारको थियो ।
तर हामी उनको नजिकका मानिसहरूले उनको अर्को आयाम पनि देख्यौं । मनुज २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अत्यन्त निराश भए । यतिसम्म कि उनी आफ्नो आमजीवनमा हुने सहभागिता नै छिन्न गरेर रिट्रिटमा बसे । उनले मलाई भनेका थिए, ‘जर्मनबाट एकजना मित्रले उनलाई एउटा किताब पठाइदिएको छ ।’ त्यो उनको भनाइमा अलिक उग्रधारणाले लेखिएको थियो । मैले मनुजबाबुको यो पक्षलाई खासै महत्त्व दिइन, किनकि एकजना कलाकारका उद्वेलन र भावनाको अर्थ उनको कला व्याख्या गर्ने दर्शन र शैलीसँग सम्बन्ध राख्छ, राजनीतिसँग राख्तैन । मनुजबाबु र मेरा साझा चाखका कुरा अनेकौं थिए ।
कलाको व्याख्या, आधुनिक मानवको अवस्था, उनले मुहारचित्र बनाउँदा पाएका अनुभव र आविष्कारहरू, उनका पुत्र मेरा विद्यार्थी रवीन्द्र मिश्रले बीबीसी नेपाली सेवामा अत्यन्त सफलतापूर्वक गरेका काम, हाम्रा साझा विषय र चाखका विषय थिए ।
मनुजबाबुका कलाको चरित्रबारे छलफल गर्ने यहाँ ठाउँ छैन । तर भयावह लाग्ने कलाहरूको पछिल्तिर उनको यथार्थ मानवको चरित्र बुझ्ने जुन सामथ्र्य थियो, त्यो काव्यिक थियो । एक दिन उनले रेखा–रचनाले मेरो मुहारचित्र बनाउन चाहे, उनको घरमा । म बसेंँ । उनले केही पटक बनाएपछि चित्त नबुझेर अर्को बनाए । मैले सोधेंँ, ‘किन, के मिलेन ?’ उनले भने, ‘एकजना मानिस, त्यसमा पनि एकजना साहित्यिकको मुहारचित्र एउटा गति हो, जहाँ अनुहारमात्र होइन, बाहिर जगत पनि हुन्छ ।’ ‘ड्रइङ्गस अफ मनुजबाबु मिश्र’मा उनले समावेश गरेको त्यो मेरो चित्रमा प्रतिविम्बित जगत मेरानिम्ति एक अर्थ खुल्न बाँकी कविता हो । पशुपतिमा उनको अन्तिम दर्शन गरेर म भाषा र रङ्गको द्वन्द्व बोकेर फर्कें ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०७:५४
केसी, गान्धी र मार्क्स
समयले गान्धी सदृश अभियन्ताको जीवनमाथि लामै टिक्टिक् गर्‍यो । यस्ता सरल समाजवादी माग राखेर, पहिले भएकै सम्झौतामा बस भनेर माग गर्ने यी मानिसको वरिपरि उठेको तरङ्गले अब एउटा अर्को चेतना जन्माउन लागेको म देख्छु ।
श्रावण १२, २०७५ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै पन्ध्रौंपटक अनशन बसेको सत्ताइसौं दिनमा यो आलेख लेख्न बसेको क्षणजस्तो असहज, चिन्ताले आक्रान्त र अनिश्चित मेरो जीवनमा कहिल्यै अनुभव भएन ।
नेपालका लोकतान्त्रिक सरकारहरूसँग नेपालका गरिब जनताले पनि चिकित्सा शिक्षा पाऊन् र उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने तिनको मागलाई शक्तिशाली दलहरू र सरकारहरूले बेवास्ता गर्दै आएको कथा नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा विसंगत पाटोको रूपमा लेखिने पक्का भएको छ ।
जनमतका आधारमा बीपी कोइरालाको २०१५ सालको संसद्मा दुई तिहाइ जितेको सरकारपछिको दोस्रो शक्ति सम्पन्न सरकार हो यो । तर बीपीका पछाडि राजा महेन्द्र त्यही संविधानले प्रहार गरेर शक्ति लिन तयार थिए । अहिलेको सरकार काम गर्न स्वतन्त्र छ । विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ । र सबभन्दा जटिल विषय पनि विवेकको प्रयोग हो । आचार, सिद्धान्त र नैतिक विषयहरूले एकैसाथ काम गर्नुपर्ने हुनाले स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
अनिश्चित, प्रकम्पित र अभिघातले प्रताडित यो इतिहासका यी क्षणको मूल रहस्य के हो ? अहिले अघि कहिल्यै नगरिएका बहसहरू उठेका छन् । सबै मेडिकल डाक्टर, युवा र नागरिक समाज आन्दोलित छन् । यी दिनहरू हेरिरहेको मनुवाले देखेका र सुनेका कुराहरूले मलाई उथलपुथल गराएका छन् । केही होला, कसैले यी अभियन्ताका मागहरूको विशाल आयामलाई बुझेर केही सकारात्मक कदम चाल्नेछन् भन्ने आशा गरिबसेको हुँ म ।
मलाई भित्र विश्वास लाग्ने आधार, नढाँटी भन्छु, अहिले कमिनिस्टहरूको सरकार छ, त्यसैले विपन्न र टाढाका मानिसका निम्ति ज्यान जोखिममा राखेर अनशन बसेका ती डाक्टरका माग यिनीहरूले आफ्ना माक्र्सवादी सिद्धान्तसँग मिल्ने हुनाले पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास थियो मेरो । तर बिस्तारै अलग किसिमका भाष्य, अलग तर्कहरू आउँदै गए । मलाई मनपर्ने लेखक, पहिलेको एमालेका एक मन्त्रीले बोलेको सुनँे अनि भत्किन थालेंँ । तिनले भने, ‘अब गोविन्द केसी सत्याग्रही रहनुभएन, अब उहाँ कांग्रेस भइसक्नुभयो ।’ मलाई चक्कर लाग्नु स्वाभाविक थियो ।
कांग्रेसले केसीको समर्थन गरेकाले त्यसो भनिएको रहेछ । कसले समर्थन गर्छन्, कसले विरोध गर्छन्, केसीको सम्बन्धमा त्यो मूल प्रश्न होइन, उनी के भन्दै छन् र कसका निम्ति कांग्रेस, कमिनिस्ट सबै सरकारहरूको शासनकालमा, तिनले मेडिकल र विश्वविद्यालयहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाएका विरोधमा लडिआएका छन्, त्यो मूल प्रश्न हो । त्यसपछि एक शीर्षनेताले के भन्नेहुन् भन्ने प्रतीक्षा थियो । तिनले बोलेपछि म पुरै भत्किएँ ।
मैले देश र विदेशमा यिनको विषयमा बोल्दा र लेख्दा यिनलाई सपना र युगसम्मत चेतनाका बाहक भनेको सम्झेंँ । लेखेको पनि छु । तिनमा प्रशंसा अनि नराम्रा गाली पनि पाएको हुँ । अनि एउटा ठूलो यथार्थ बुभेंँm । गोविन्द केसी किन जुम्लामा अनशन बस्न गएका रहेछन् । मैले त्यति पनि बुझेको रहेनछु । यी टाढाका नरनारीहरूले नेपालका समाजवादी आन्दोलनमा सहयोग गरे । ती विपन्न र राज्यद्वारा ठगिएका मानिसहरूले जसलाई सहयोग गरेका थिए, तिनीहरूले बिर्सिए ।
तिनीहरू राजधानीको नागर परिवेश, त्यसभित्रको एउटा पुँजीवादी माहोलमा हराए र अर्कै किसिमका मानिसहरूको रक्षाको निम्ति काम गर्न थाले । जुम्लीले अस्पताल पाउन्, मेडिकल शिक्षा पाउन् भन्ने यी डाक्टर त्यहाँ फर्किंदा त्यहाँका अदृश्य नारीहरू, वृद्ध र बालकहरू बाहिर आए । अब समयको गति अर्को भएछ, यताबाट उपेक्षितहरूकोमा कुनै पार्टीको एजेन्डा नबोकेका सत्याग्रही र मानवतावादीहरू हतियार होइन, रित्तो पेट लिएर त्यता पुग्ने बेला आएछ ।
समयले यी गान्धी सदृश अभियन्ताको जीवनमाथि लामै टिक्टिक् गर्‍यो । यस्ता सरल समाजवादी माग राखेर, पहिले भएकै सम्झौतामा बस भनेर माग गर्ने यी मानिसको वरिपरि उठेको तरङ्गले अब एउटा अर्को चेतना जन्माउन लागेको म देख्छु । त्यो अहिंसावादी छ । सत्याग्रही दर्शनमा उठेको छ । र कसैलाई घृणा होइन, परिवर्तन हुनसके तिमी ठिक छौ, केही बिग्रेको छैन, नभए समस्यामा पर्छाै भन्ने आह्वानले बनिन लागेको छ । गोविन्द केसीको वार्ता समूहका, हाम्रानिम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्न तयार केसीका लागि धेरै कुरा छोड्न तयार छौं भन्ने डाक्टरहरू र त्यही समूहका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले टीभीमा दिएका वार्ताहरू हेरेंँ ।
राजनेताहरूका केही आलम्बनका कडा आलोचना गरे पनि आफ्नो विचार बदलेर आउने, भुल सुधार गर्ने नेता र अरू व्यक्तिहरू ठिक हुन् र हुनसक्छन् भने उनले । र थपे, अनशन नबसे पनि हामी सत्यको निम्ति लड्ने सबै सत्याग्रही हौं । सत्यको जित हुन्छ, विडम्बनाहरू खुल्दै जान्छन्, हामी सबैमा असल कर्म गर्ने गुण विद्यमान हुन्छ, तर त्यो कर्म गर्नुपर्छ । सबैको जित हुन्छ, कोही हार्दैन भन्ने ती वाचाल वकिल, डाक्टरहरू, अरू युवाहरू, लेखक, जसमा पहिले माओवादीका नजिक रहेका युवक, उन्यासकार युग पाठक छन्, जसको लेख ‘व्यापारीको हातमा स्टेथेस्कोप ?’ (‘नयाँ पत्रिका’, १० साउन, २०७५) भर्खरै पढेको छु ।
नागरिक समाजका स्वतन्त्र मानिसहरूका बलिया विचारहरूले पहिले कहिल्यै नल्याएको तरङ्ग यसपालि ल्याएको छ । अब डा. केसीको सत्याग्रहको आयाम फराकिलो भएको छ । तिनका सत्याग्रहहरू रूपान्तरित भएर सिद्धान्तहरू जन्मिएका छन् । अब केसी महात्मा गान्धी सदृश भएका छन् । अधिवक्ता अर्यालले एउटा सम्वादमा भने, ‘आजको आतङ्कले आक्रान्त समयमा गोविन्द केसीको सत्याग्रह बलियो शान्तिको शक्ति हो ।’ तिनले थपे, ‘केसीको सत्याग्रहको महत्त्व वैश्विक छ । त्यस अर्थमा उनको जीवनले अब नेपालमा वैचारिक र भोलिको निम्ति एउटा कार्मिक युगको जग बसालिसकेको छ । यो बुझ्दा मन केही शान्त भएको छ ।’
गान्धीका विचार र शासनमा बस्ने र सरकार चलाउनेहरू, खासगरी नेहरू र कांग्रेसहरूको बीचमा सैद्धान्तिक द्वन्द्व भए । नेहरूका विशाल बाँधहरू बनाउने, पानीलाई लिएर महत्त्वाकांक्षी हुने, ठूला कारखाना खोल्ने कुराका गान्धी विरोधी थिए । नेहरूलाई यो बलियो प्रतिरोधले निकै असहज बनाएको कुरा इतिहास भन्छ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ (१९७३) लेख्ने जर्मन अर्थशास्त्री सुमाखरले गान्धीका विचारको सार यसरी खिचे । अहिंसात्मक, सरल, सानो, पैसा बचाउने, ग्राममा आधारित, आत्मनिर्भर र काम पाउन सक्ने अर्थनीतिको अवलम्बन गर भन्ने गान्धीको भनाइ थियो ।
तर नेहरू र पटेल आदिहरूले मुक्ति संघर्षमा गान्धीकै विचार र नेतृत्व माने । गान्धीको हतियार सत्याग्रह थियो । त्यसको राजनीतिसँग सम्बन्ध थियो । केसीको सत्याग्रहमा अहिलेका राजनेताहरूले जतिसुकै अन्धाधुन्द राजनीतिक चरित्र देखेको गफ लाए पनि तिनका मागहरू अति ‘सरल, साना, पैसा बचाउने, अहिंसात्मक’ दर्शनले निर्देशित राजनीति इतर छन् । यसपालिको सत्याग्रहले नयाँ आयामहरू खोलिदिएको छ, जुन अस्पतालका अमूक कोठामा अनशन बस्ने गोविन्द केसीको अवस्थासँग मात्र सीमित रहेन ।
यही साउन २ गते कान्ति बाल अस्पतालमा संगीता थापाको निमन्त्रणामा कलाकारहरूले बालक बिमारीहरूको शान्तिको निम्ति गरिरहेका पेन्टिङहरूको प्रदर्शनमा बोल्न गएको थिएँ । युवा कलाकारहरूले बालकहरूसँग बसेर बनाएका कलाको प्रभाव धेरै बुझियो । अर्कै लेखको विषय हो । तर अस्पतालका डाइरेक्टर डा. गणेशकुमार राईले अस्पतालको हालत अत्यन्त दु:खित मुद्रामा परिचय गराएपछि म अत्यन्त विह्वल भएँ । बालक बिमारीले पिउने पानी छैन, तिनलाई राख्ने कोठा छैन, एकैसाथ राख्दा बिमार सरेको छ । उपचारको साधन कम हुँदै गएको छ । काम गर्नेलाई दिने तलब छैन ।
सबैतिरबाट घेरिएर धराशायी हुनलागेको जुम्लादेखिका बालकहरू उपचार गर्न आउने देशको यो एकमात्र बाल अस्पताल सबैका निम्ति अदृश्य रहनुले हामीलाई डा. गोविन्द केसी के भन्दैछन् भन्ने कुरा सुन्नैपर्ने आह्वान भएको छ । त्यसको दुई दिनपछि सुर्खेतका २ जनामध्येका एक बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठी ‘कान्तिपुर’मा छापियो, जसमा उनले भनेका छन्, ‘म सरकारले पठाएको चिकित्सक होइन... यहाँ छु र रहनेछु ।’ उनले सोधेका छन्, ‘काठमाडौंमा ७ मेडिकल कलेज छन्...। हाम्रो प्रदेशमा १ पनि नहुने ? यो बाल मृत्युदर कसरी घट्ला ?’
अन्तत: २७ औं दिनमा डा. केसीले अनशन तोडेका छन्, नौबुँदे सहमति गरेर । म भावातीत भएर आशा गर्छु, अब अपूर्व उज्यालो दिन आउनेछ ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:०५
भातलाई साथी जाती
प्राडा ढुण्डीराज पौडेल
छाती चर्किंदा मन चस्किन्छ